Waa Maxay Waddani? |
Maxamuud Axmed Muuse — June 9, 2019
Waxaan halkaan idinku soo gudbinayaa waxa ay tahay waddaniyad, bulshadu sida ay u qeexday iyo addeegsiga waddaniyadda. Bulsho kasta oo ku nool koonka aynu joogno waxay leedahay muwaadin iyo waddani. Haddaba waa maxay macnaha waddani?
Waxaan soo qaadanayaa dhowr macne oo ka hadlaya waxa uu yahay waddani.
Waddani waa qof jecel dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisa.
Waddani waa qof dareen shakhsiyadeed leh kaas oo ka damqada wax kasta oo dhib ukeeni kara dalkiisa hooyo iyo dadkiisa.
Waddani waa qofka mar walba utaagan, una heelan ilaalinta, xaqdhowridda dhulkiisa hooyo.
Waddani waa midka mar walba naftiisa ka hormariya waddaniyadda. Waa midka ushaqeeya dalkiisa si mutadawacnimo ah, bilaash ah isagoon cidna wax kasugayn, iskiis isku xilqaamay.
Waddani waa qofka dhib iyo dheef ku qanacsan in uu dalkiisa hooyo joogo, ilaashado, kana dhowra xadgudub kasta oo uga yimaada dalka dibadiisa iyo gudihiisa.
Waddani waa midka ka falceliya dhibaato kasta oo ku soo wajahan dhulkiisa hooyo isagoo cidna kala tashan, gaashaanka udaruura ruuxa ama kooxda doonaysa in ay bohol ka ridaan dalkiisa hooyo.
Waddani waa qof jecel in uu dhisto dhulkiisa, kuna faano in uu leeyahay dalkiisa, jecelyahay wax walbana uu ka hormarinaayo. Waa qofka bulshada kale ee caalamka tusa bilicda, quruxda, baaxadda, barwaaqada taal geyigga, uguna faana bulshooyinka kale in uu haysto waddan hodan ah, Alle kumanaystay nimcooyinka kala duwan.
Waddani waa qofka had iyo jeer raadiya waxa uu dhulkiisa hodanka ku yahay, waxyaabaha khaaska u ah, bulshadana usoo bandhiga waxkasta oo ka dahsoon aragiisa, una muujiya dareen waddaninimo oo uu ku jeclaysiinaayo bulshadaas in ay dadyowga kale dunida ay ka horeeyaan hadday ahaan lahayd mid kheyraad iyo mid dhaqaale.
Waddani waa midka jecel dalkiisa, taageera buuxda u haya, ilaaliyana awoodda iyo danaha. Waddankiisa mid siyaasadeed iyo mid dhaqan dhaqaale. Waa mid fahan dareen ku dhisan oo ku dhiirigeliya muwaadinka in uu naftiisa iyo hantidiisa u huro sidii uu dalkiisa ugalin lahaa.
Waddaniga waa qofka aan meelna ka aadin dalkiisa oo jecel, kuna faana. Waa midka keliya oo udhiman kara waddankisa. Ma jecla in la soofaragashado. Waxaa ukala soocan danta guud iyo midda gaar.
Waxa uu fiiro dheer uleeyahay waxa waddankiisa dhib ukeeni kara, faa’idada uleh iyo waxa dib dhac sababi kara. Waddanigu waxa uu had iyo jeer jecelyahay in la dhaho waddankaaga waa qani, barwaaqo iyo nimco kala duwan baataal. Dhulkaagu waa mid qurux badan, dunida kale waad ka horaysaan.
Qofka leh damiirka iyo dareenka waddaninimo waxa uu dareemaa farxad kolka dadyowga kunool koonkaan aynu joogno ka sheekaynayaan dalkiisa, wuxuuna ku dhiiradaa in uu sii wanaajisto deegaankiisa iyo guud ahaan waddanka. Inta aan ka soo sheekaynay oo keliya laguma qeexi karo macnaha iyo milgaha ku duugan waddani, balse waa duurxul kooban oo aan ku qeexayno erayga si dadku ufahmaan waxa uu yahay waddani iyo waxa uu ka dhiganyahay.
Sida aan horay uga soo sheekaynay waddanigu waa midka keliya ee waddanku ubaahan yahay. Dalku uma baahna muwaadin asii uu ubaahanyahay wadddani dhab ah. Waxaad arkaysaa dadkeena oo dhahaya waxaan ahay waddani, haddana waxa uu hog uqodayaa dalkiisa hooyo isagoo dareensanayn macnaha guud uu leeyahay waddani iyo waxa uu ugu fadhiyo dalka.
Waxaan doonayaa in qofkasta oo Soomaaliyeed maanta barto waxa uu yahay waddani si dalkiisa ugu addeego, una noqdo mid uheelan in uu wax uqabsado dhulkiisa.
Waxaad wax ku tahay waa dalkaaga hooyo oo qudha, ma jirto meel aad ku doorsato aan ahayn ciidaada. Waxaad dareemi kartaa in dalkaaga hooyo yahay mid cajiiba oo wanaagsan kolka aad tagto dhul aadan lahayn ee kale. Imisa aragtaa waddani dhahaya waxaan rabaa in aan dalkaygii dhisto, dib ugu noqdo una horseedo barwaaqo iyo soo kabasho balaadhan. Balse haddana waxaad arkin qof ku silicsan dhul uusan lahayn, waddan uusan jeclaysan qaabka loola dhaqmaayo, tixgelin la’aanta iyo daryeel la’aan.
Waddaninimo waxaa dareema qofka dalshisheeye lagu xidho, lagu dilo, lagu rafaadsho, dhul uusan aqoonna joogo. Qofkaas ayaa wax laga waydiin karaa muhiimadda uu leeyahay dalkaaga hooyo. Waxaad arkaysaa qof ka faanaya dhulkiisa kuna faanaya dal uusan lahayn, damiirkiisuna siiyay in uu buunbuuniyo dal kale iyo dad kale. Kaas ma odhan karnaa waa waddani, waydiintu waa maya waayo waddani ma ahan mid dalkiisa ka faana ee waa mid ku faana balse kaas waxaan dhihi karnaa oo keliya waa muwaadin.
Waddanigu waa u horseedaha bulshada farxad iyo baraare, waa ilaaliyaha bilicda, baaxadda dhuleed, bad iyo biri, kheyraadka ugoonida ah, deegaanka iyo xayawaanka ku kornool, iyo dhismaha dhulkiisa, iyo ka hortagga waxa sababi kara burbur iyo dib udhac.
Waddanigu waa midka aan ogolaan dad iyo dalal shisheeye in ay gurtaan dalkooda hooyo, burburiyaan, dib udhac iyo qalalaase siyaasadeed ku abuuraan dalkiisa.Waddanigu marnaba ma aqbalo in uu arko dad xaalufinaya deegaankiisa, lana dilaayo ama gumaadayo dadkiisa wuxuuse wacad ku maraa in uu difaaco danaha dhulkiisa iyo dadkiisa.
Waddanigu ma ahan maqaar saar u addeega dal shisheeye ama dad shisheeye, waa dhiirane aad ufeejigan, umaskax badan, u oolimaad dheer, waana aragti dheere meel fog wax ka eegga. Waddanigu uma adkaysan karo dhibka ay qabaan dadkiisa, waa mid u ilmeeya waqti kasta oo uujoogo, waana udam qade aanan marna jeclayn in ay dareemaan dadkiisa wax yar oo murugo leh, waxa uuna naftiisa, waqtigiisa, maalkiisa, fikirkiisa iyo xoogiisa uhuraa waddankiisa hooyo.
Waddanigu ma noqdo dabo dhilif ama kabaqaad, mana noqdo mid ka faana dhulkiisa, ma ahan mid ku xadgudba xuquuqda dadka, deegaanka iyo waxa ku kornool. Waddanigu ma ahan mid yeela wadddankaaga soo burburi, qaadona kiishkaan lacagta ah, waxkasta oo ubaahatona anagaa kuula diyaar ah. Adolof Hitler waxaa la waydiiyay dadka yaa kugu liitay? Wuxuu ku jawaabay dadka waxaa igula liita ruuxii igu garabsiiyay in aan dalkiisa ku duulo, burburiyana.
Waddanigu ma ahan qof dhuuni raac ah, dalkiisa u horseeda burbur iyo barakicin, musuq iyo xatooyo dadwayne. Waddanigu ma ahan mid dalkiisa ka doorbida shilimaad IWM. Waddanigu waa kan bixiya xaqa dalku ku leeyahay sida cashuuraha iyo wixii khadimaada oo dalka wax loogu qabanaayo.
Xiligaan maanta aynu joogno waxa yaraaday fahamkii ay Soomaalidu ka haysteen waddaniyadda iyo waxyaabaha laga rabo qofka waddaniga ah. Ummadda Soomaaliyeed iyagaa dalka iskaleh, marti kuma ahan dalka madax bay ka yihiin iyagaa laga rabaa in ay dhexda uxirtaan ilaalinta iyo dhowridda deegaankooda iyo guud ahaan dalka oo idil. Waxaad arkaysaa qof dhahaya ani waxaan ahay waddani, haddana laguma soo kari karo kaalay aynu dhulka dhisanee. Bal dhisid iskadaaye waxaa laga helayn in caaga yar ee biyaha ku cabaayo in uu dhigo meesha loogu talo galay iyo in uu ka qaado waddddada haashka uu soo reebo amaba haashka oo baxaya ayuu waddada ku xooraa.
Haddaba ma dhihi karnaa qof kaas waa waddani? Su’aashu waa maya waayo nin dalkiisa aan ka leexinayn wax yar ee dhibaya in uu waddani sheegto waa ka mamnuuc.
Tags: Waa Maxay Waddani?
Next post Fahamka Waddaniyadda
Previous post 6 Hiwayaddooda oo Taageero Sirdoonka Nolosha